Ifulethi lezivakashi ezizimele olwandle. Ifulethi lihlukaniswe nendlu enkulu. Imizuzu emi-5 ukusuka edolobheni, kuthule kakhulu. Izivakashi ziyakwazi ukufinyelela olwandle oluyimfihlo. Izinhlanzi eziningi zingabonakala kalula. Kuhlinzekwa imishini ye-snorkeling.
**IZINTENGO ZOKUKHUTHAZWA KWESIZINI EPHANSI**
Intengo izophinda kabili ngesikhathi sesizini ephezulu. Bhuka leli fulethi elihle ngenkathi ukwazi! Nginelinye ifulethi endaweni efanayo futhi ngivame ukubhukha ngamaholide nezinye izikhathi eziphakeme kakhulu kusasele izinyanga eziyi-6-8. Lokhu kufakwa ohlwini kokubuka okungcono kakhulu! Sicela ubheke okunye ukufakwa kuhlu kwami ngezinsuku ezengeziwe.
Ukubuka okumangalisayo ngazo zonke izikhathi zosuku. Lesi ngesinye sezakhiwo ezimbalwa khona ogwini lolwandle. Indlu yezivakashi isendaweni ethule kakhulu, ekhethekile futhi uzojabulela umsindo wamagagasi ashaya kancane ogwini kusuka efasiteleni lakho elimangalisayo.
Ulwandle lungokwemvelo futhi alulungiswanga ngo-100%, lulungele ukubhukuda nezinhlanzi zasezindaweni ezishisayo ongazithola ku-aquarium. Uzoba namathuba amaningi okuhlola imvelo. I-coral yemvelo ngaphakathi kwezixhobo ibamba izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo zezinhlanzi ezincane. Kuhle kakhulu ukubhukuda, ukushiswa yilanga, noma ukuphumula nje nokujabulela ukubuka.
4.57 ·199 okushiwo abanye
4.57 out of 5 stars from 199 reviews
4.57 · 199 okushiwo abanye
Isakhiwo sisendaweni eyimfihlo. Ngokungangabazeki lokhu kuyimpahla engcono kakhulu endaweni. Omakhelwane abaningi bangodokotela, abameli, noma abanye ochwepheshe
Ngiyazama ukubingelela izivakashi uma zifika, kodwa ingxenye enkulu ngizobashiya bejabule. Imibuzo iphendulwa ngenjabulo noma nini.
Hlola ezinye izinketho ezise- Chalan Pago Ordot namaphethelo